संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा, कार्यान्यवन र पालन गर्न आफै असफल ओली सरकार — Sanchar Kendra
त्यति मात्रै हैन संविधानको पूर्ण कार्यान्यवन र पालन गर्न सरकार आफै असफल भएको छ । संविधानको मर्मविपरित सरकारले बिद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागाएकाे छ । उसका नेता कार्यकर्तामाथि व्यापक दमन, धरपकड गरेर दुख दिएको छ । झुट्टा मुद्दा लगाएर फसाउने गरेको छ । सरकारको आलोचना गर्नेहरुलाई समातेर जेल कोचिएको छ ।
नेपाली जनताको बलिदान, त्याग र तपस्याको प्रतिफलस्वरुप करिब ६५ वर्षको लामो प्रतिक्षापछि नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थासहितको संविधान जारी गर्ने काम त भन्यो तर केहि समिति व्यक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि मात्रै यसको उपयोग गर्न पाए।
नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ साल असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान सभाबाट जारी गरेका थिए । त्यही संविधान जारी गरेको दिनको सम्झनामा असोज ३ गतेलाई सरकारले संविधान दिवसका रुपमा मनाउने गरेको छ ।
संविधान जारी भएका पाँच वर्षमा आइपुग्दा यसले परिकल्पना गरेको नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुरुप तीन तहको सरकारको संरचना तयार गरी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । मौलिक हकका कानूनहरु बनिसकेका छन् । तर तदअदुरूपका नियमावली नबन्द मौलिक हक नै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
प्रदेश नं २ मा २१ वटा, २ स्थानीय तहमा २ कानून बनेका छन् । बागमती प्रदेशमा २४ वटा, १३ स्थानीय तहमा १३ वटा कानून बनेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा २७, १८ स्थानीय तहमा १८ वटा कानून, प्रदेश नं. ५ मा ३१, २ स्थानीय तहमा ७ वटा कानून बनेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा २१ र १९ वटा स्थानीय तहमा १९ कानून र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा २७ वटा र ८८ स्थानीय तहमा १०३२ कानून बनेका छन् । नेपालको संविधानअुनसार सङ्घले संविधानसँग नबाझिने गरी कानून बनाउँछ । सोहीअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ ।